AMP-Plugin loogu talagalay PHP - Soo Degso & Tilmaamo - SO
offline_bolt Abuur bogagga AMP
assignment_turned_in Hubinta keydka AMP
power Qalabka PHP AMP
warning Qalabka AMP ma shaqeynayo?
extension Cudarada AMP YouTube Tag
extension Cudarada AMP Brightcove Tag
extension Abuur AMP Carousel Slider
extension Waxqabadka liiska tooska ah ee AMP
edit_attributes Ogeysiiska ilaalinta xogta
PHP AMP Plugin - Soo Degso & Tilmaamo
Iyada oo la adeegsanayo ' AMP' ee loo yaqaan 'PHP plugin' waxaad si fudud, gebi ahaanba toos ah, ugu abuuri kartaa bogagga Google AMP bogaggaaga internetka.
Ku hagaaji websaydhkaaga PHP aaladaha moobaylka iyo Google Mobile Index Index adiga oo aan u baahnayn barnaamijkaaga gaarka ah ee AMPHflix ee bog kasta!
Ku rakib fiilada AMP PHP
Tilmaam kahor intaadan bilaabin rakibaadda fiilada ee PHP-AMP: Qaar ka mid ah xalalka CMS, amp-cloud.de waxay bixisaa xayeysiisyo gaar ah oo loogu talagalay Google AMP kuwaas oo xitaa ka fudud si loo rakibo loona maamulo! - Beddelka "AMP for PHP plugin" , mid ka mid ah waxyaabaha soo socda ee Google AMP ayaa xiiso kuu noqon kara:
Ku rakib boggaga WordPress AMP
Tallaabada-1: Soo dejiso "AMP for PHP Plugin"
Kala soo bax nooca "AMP for PHP Plugin" hadda oo ah faylka ZIP-ka ee degelka soo socda ee soo dejinta - Faylka ZIP-ka waxaa ku jira fayl la yiraahdo "amp" kaas oo ka kooban dhammaan faylasha loo baahan yahay in lagu rakibo oo la isticmaalo fiilada AMP.
Degso: AMP loogu talagalay plugin PHP (6,18 KB)
Tallaabada-2: Ka soo saar "AMP for Plugin PHP" -ZIP-faylka
Feeji / soo saar faylka ZIP-ka ee aad soo dejisay.
Ka dib furfurista / soo saarista kadib waa inaad hadda haysataa "galka" oo leh magaca "/ amp /" kaas oo ay ku yaalliin faylasha faylasha ee PHP-AMP.
Tallaabada-3: Ku kaydi faylasha faylasha ee PHP server-ka websaydhka
Geli galka aan la furin ee leh magaca "/ amp /" galka asalka ah ee server-kaaga si markaa galka loogu gaaro boggaaga hoostiisa cinwaanka soo socda:
Si loo tijaabiyo in galka si sax ah loogu keydiyay shabakadaada, si fudud ugu yeer URL-kan soo socda - Haddii rakibitaanku sax yahay, waa inaad aragtaa farriin kuu sheegaysa in websaydhkaagu uu adeegsanayo fiilada AMP ee ka socota amp-cloud.de , haddii kale kumbuyuutarka si sax ah looma rakibin waana inaad mar labaad maraysaa talaabooyinka kor ku xusan:
Tallaabada-4: geli sumadda AMPHflix!
Ku beddel qaybta "http: //" "https: //" haddii aad ku isticmaaleyso HTTPS boggaaga
Ku beddel qaybta " Qodobkaaga URL" adoo adeegsanaya UTF8 qaabaysan oo cinwaan ah oo ah bogga hoose oo aad ku dareyso sumadda AMPHflix (oo ay ku jiraan. "Http: //" ama "https: //")
Si aad si habboon ugu qorto URL, waxaad isticmaali kartaa cinwaannada tooska ah ee bilaashka ah ee 'URL', tusaale ahaan: https://www.url-encode-online.rocks/
Tusaale UTF-8 cinwaan sir ah:
Kala duwanaanta 2:
Haddii aad u isticmaasho HTTPS boggaaga, ku beddel labada qaybood "http: //" kuna beddel "https: //"
AMP lambarka nambarka PHP
<?php echo " <!DOCTYPE html> <html> <head> <title> Cinwaankaaga meta </title> <link rel="amphtml" href="https://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/amp/amp.php?url=".urlencode("https://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF']."?".$_SERVER['QUERY_STRING']."")."" /> </head> <body> Koodhka isha jirkaaga ... </body> </html> ;" ?>
Maxaad u adeegsaneysaa fiilada AMP-PHP?
Rasmiga AMP ee loogu talagalay plugin-ka PHP ee ka socda amp-cloud.de wuxuu ka hawlgeliyaa Boggaga internetka ee loo yaqaan 'Accelerated Mobile Pages' (AMP) boggaaga internetka ee PHP, si toos ah hoostiisa martigaliyahaaga, sida lagu taliyay tilmaamaha martigeliyaha Google ee AMP !
AMP Seite erstellen Ilaalinta xogta & isticmaalka cookie daabacaad
Waad salaaman tahay waadna ku mahadsan tahay booqashadaada! - Si loo abaabulo shaqeynta "www.amp-cloud.de", cookies ayaa loo isticmaalaa. Tani waxay sidoo kale ku jiri kartaa adeegyo iyo nuxur bixiyeyaasha saddexaad, tusaale ahaan inay bixiyaan waxqabadyada warbaahinta bulshada ama waxyaabaha fiidiyowga ah, laakiin sidoo kale inay awood u siiso qarsoodi ahaan, falanqaynta tirakoobka ee waxqabadka websaydhka si loo hagaajiyo loona maalgeliyo jiritaanka boggan. Taageerada dhinaca. Iyada oo kuxiran shaqada, xogta laguu qoondeyn karo waxaa loo gudbin karaa dhinacyada saddexaad oo ay baaraandegi karaan iyaga. Waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan adeegsiga iyo xulashooyinka loogu beddelayo setinkaaga cookie halkan: Macluumaadka ilaalinta xogta
U oggolow dhammaan cookies-ka
Diid dhammaan cookies